Nke abụọ mmekọ Hospital of Harbin Medical University - Shenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
Secondlọ ọgwụ Njikọ nke abụọ nke Mahadum Ahụike Harbin
Secondlọ ọgwụ Njikọ nke abụọ nke Harbin Medical University, nke hibere na 1954, bụ nnukwu ụlọ ọgwụ klaasị mbụ nke ọkwa 3. Ọ na-ejikọ ọgwụgwọ, nkuzi, nyocha sayensị, mgbochi, nlekọta ahụike na nrụzigharị.
Hospitallọ ọgwụ ahụ na-ekpuchi mpaghara nke mita 500,000 na mpaghara owuwu nke 530,000 square mita. O nwere ngalaba nlekọta ahụike 1, ngalaba inpati 11 na 4 "ụlọ ọgwụ dị n'etiti" -rheumatism ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ na-arịa ọrịa obi, ihu ihu ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ na-arịa ọrịa shuga. E nwere ihe karịrị ndị ọrụ 4500 nọ n'ụlọ ọgwụ. Dị ka nke abụọ Clinical Medical College of Harbin Medical University, o nwere 3 doctoral degrees na-enye ntụpọ nke ịdọ aka ná ntị mbụ, 21 doctoral degrees na-enye ntụpọ nke ọzụzụ nke abụọ, na 33 doctoral na master degrees na-enye ntụpọ nke atọ -level ọzụzụ.
N'ụlọ ọgwụ ahụ, e nwere square mita 5,200 nke ụlọ akwụkwọ nkuzi nke onwe, 5,000 mita anọ nke "Demlọ Ọrụ Ngosipụta Nkuzi Nkuzi nke Mba" na "National Virtual Simulation Experimental Teaching Center", square mita 22,000 nke "usoro ngosiputa ọzụzụ nkuzi maka onye isi", 14,000 square mita nke ulo-elu ulo na 16,000 square mita nke gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ. Kemgbe Atụmatụ afọ ise nke iri na abụọ, akwụkwọ ọgụgụ atụmatụ mba iri na asatọ na akwụkwọ ọgụgụ ọdịyo na nke ọdịyo bụ nke ndị mmadụ dị mkpa nọ n'ụlọ ọgwụ anyị dezigharịrị, ọ bụkwa ndị ọrụ ibe anyị na-edezi akwụkwọ ọgụgụ iri na abụọ dịka ndị editọ ndị otu mgbe ụfọdụ ndị ọrụ ibe anyị esonyela na nhazi akwụkwọ akwụkwọ iri anọ na asaa. . N'ime afọ atọ gara aga, a kwadoro ngụkọta nke ọrụ nkuzi 51 karịa ọkwa mpaghara obodo, gụnyere ọrụ 1 CMB; Enwetara nsonaazụ nkuzi 19 karịrị ọkwa ngalaba obodo; E bipụtara akwụkwọ nkuzi mba 94. Na-arụsi ọrụ ike na-eme mgbanwe na mmekọrịta mba ọzọ, nwee kọntaktị sara mbara na mahadum 26 na ụlọ akwụkwọ ọgwụ, gụnyere Mahadum Pittsburgh, Mahadum Miami, na Mahadum Toronto na Canada, ma rụọ ọtụtụ nkwado sayensị.